यी नियमका साथ काठमाण्डौमा एक साता निषेधाज्ञा थप - Akhabarpati.com
कांग्रेस अधिवेशन दुप्चेश्वर सर्वसम्मत (नामावलीसहित)
कांग्रेसको बेलकोगढीमा युवा जमात सहित नगरसभापतिमा पाण्डेकाे बलियो उम्मेदवारी घाेषणा (यस्तो छ टिम)
फरक विधामा प्रस्तुत हुँदै दुप्चेश्वरमा जन्मिएका गायक मदन थापा (भिडियो सहित)
बिष्णु माझीको फेरी अर्को दशैँ तिहार गित (भिडियो सहित)
नुवाकोट काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभा नं १ को प्रदेश क्षेत्र क को सभापतिमा शुशिल खड्काको बलियो दाबेदारी
साहस उर्जाको आइपीओमा पहिलो दिनमै यति धेरैको आवेदन
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आईपीओ आज, आवेदन गर्नु अघि कस्तो छ ? ( जान्नुहोस )
मेलम्ची पिडितको डायरी, जस्ताको तस्तै
सिन्धुपाल्चोकमा ५० जना बेपत्ता भएको मन्त्री तामाङको दाबी , सहयोगका लागि शेयर गरौं
दुप्चेश्वरमा कोरोना संक्रमणबाट एक जनाको निधन
हेलम्बुका बाढी पिडितलाई रु. ५ लाख सहयोग गर्ने दुप्चेश्वरको निर्णय
बुद्धभूमि हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
प्रदेश लोकसेवा आयोग ले माग्यो यति धेरै कर्मचारी (सूचना सहित)
घ्याङफेदीमा रु. ५१ लाखको लागतमा रष्टिक हाउस निर्माण
दुप्चेश्वरको बजेट सार्वजनिक : रु.४४ करोड २४ लाख विनियोजन
यी नियमका साथ काठमाण्डौमा एक साता निषेधाज्ञा थप
२०७८ श्रावण १९ गते, मंगलवार प्रकाशित
काठमाण्डौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक साता लम्बिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्याल काठमाण्डौले काठमाण्डौमा साउन २१ गतेबाट साउन २७ गतेसम्म एक साता निषेधाज्ञा थप गरिएको सूचना जारी गरेको हो। यसअघि लागू निषेधाज्ञाको अवधिमा साउन २० गते राति १२ बजेदेखि सकिँदैछ।
निषेधाज्ञाका बेला औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने दिइने भएको छ। अन्य पसल तथा व्यवसायहरु भने साँझ ७ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २ मिटर भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ।
अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अर्डर, रेस्टुरेन्ट तथा फास्टफुड तथा अन्य अर्डरहरु टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागिमात्र साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। घरबाहिर निस्किँदा दुई व्यक्तिबीच कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीसाधन स्वीकृत सिट क्षमताअनुसार चलाउन पाइनेछ। यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्नेछ भने दैनिक रुपमा सवारीसाधन स्यानिटाइज गर्नुपर्नेछ।
मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनाका साथ सञ्चालन गर्न पाइनेछ। निर्माण सामग्री ढुवानी बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। परीक्षा सञ्चालन हुने कुनै एक स्थान हल तथा कोठाको आकारअनुसार २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला जम्मा हुन पाइने छैन। परीक्षार्थीको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ भने अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, दोहारी, स्विमिङ पुल, मनोञ्जन स्थल, संग्राहलय, रंगशालाजस्ता भीडभाड हुने स्थान खोल्न पाइने छैन। खुला स्थानमा मानिसको भेला, भीडभाड, सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोजभतेर आदि गर्न र गराउन पाइने छैन।
शिक्षण संस्थाहरुमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गराउन पाइने छैन।
कस्तो रहला त आजको मौसम ?
कांग्रेसको म्यागङ सभापतिमा सिंहराज तामांगको दाबि सहित उम्मेदवारी घोषणा
कोहिनूर क्रियसन प्रा.लि
प्रवन्ध संचालक/अध्यक्ष: उमेश थापा
दर्ता नं: २५०४३६/०७७/०७८
© 2021, All right reserved to Akhabarpati.com